Shiinaha Warshadda bacda Sumpp-ka iyo alaab-qeybiyeyaasha. BAOTE
Bacda Sumpp Skip
Bacda Qashinka (Skip bag) waa hab bey'adeed u wanaagsan oo qashinkaaga looga takhaluso. Markay soo galaan boostada waxay u baahan tahay oo keliya hal safar si loo soo qaado boorsadaada booska marka la barbar dhigo laba dhaqdhaqaaq oo kiro ah. In ka badan 90% qashinka aan ururinno ayaa laga weeciyaa qashinka lagu shubo iyadoo la heli karo warbixin buuxda.
Ku boorso boorso badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu qaado qashinka qoyska iyo qashinka dhismaha. Way ka adag tahay oo fudud tahay, kana fudud tahay dhaqaajinta tan qashinka birta ah. Miisaanka rarka waa min 500kgs ilaa 4000kgs. Cabbirku wuxuu ka socdaa 1m³to 6m³. Dabcan, waxaan kuu qorsheyn karnaa oo aan kuu soo saari karnaa noocyo badan oo jawaano ah oo midab kala duwan leh oo daabacan sidaad u codsatay
Maxaad ugu dooratay la shaqaynta BAOTE TEAM?
Waxaan haynaa 4 sano Bacda qashinkaNaqshadeynta OEM iyo ODM iyo khibrada wax soo saar. Waqtigan xaadirka ah waxaan la shaqeyneynaa ilaa 20 shirkadood oo qashinka qaada kuwaas oo ka kala yimid America, Australia, New zealand, Norway, Poland, Canada iyo wixii la mid ah.
1: Kaliya kuma soo saari karno bacaha sida ku cad sawirka macmiilka ama sawirradiisa, laakiin sidoo kale waxaan kala hadli karnaa macaamilka oo aan cusbooneysiin karnaa dhismaha bacaha. Haddii aad tahay shirkad cusub oo dooneysa inay ganacsigan sameyso, fadlan nala soo xiriir, waxaan ku siin karnaa talo soo jeedin wanaagsan oo aan kuu keydin karnaa kharashka adiga kugu baxa.
2: Warshaddeenu waxay leedahay midabbo badan oo midabkeedu yahay macaamiisha. Cagaar, buluug, madow, caddaan, jaalle, casaan, oranji, casaan iyo wixii la mid ah.
3: tayo sare leh sicirka tartanka.
4: Amarka yar ayaa la aqbali karaa.
5: Meel u dhow dekedda, warshaddeenu waa mid maxalli ah oo ku taal magaalada Qingdao, waxaan u rari karnaa badeecadaha si dhakhso leh.
Hadda, fadlan noo soo dir fikraddaada iyo boorsooyinka boodboodka ee aad xiiseyneyso, waxaan ku siin doonaa faahfaahin iyo dalab wanaagsan!
Ku soo dhawow inaad soo booqato warshadeena, waxaan ku siin doonaa soo dhaweyn diiran waxaanan rajeyneynaa inaan kula dhisi karno markab xiriir dheer leh
Hore: Bacda qashinka Asbestos
Xiga: Mashiinka Beebarka Tooska ah ee Raidial Bidirection Extruder
A1 aruurinta Boorsada Qashinka
Bacda qashinka Asbestos
Hex handarraabbadeedii, Qaab dhismeedka, Lag Bolts, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, U Bolts, Gawaarida Gawaarida,